Naypyitaw – Department of Medical Service
Posted on June 20, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊နေပြည်တော်သည် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ဇ၀နသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ သစ်၀န်တိုင်း ကျေးရွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ (က)ဖုန်းနံပါတ် အုပ်ချုပ်မှုဆောင် – ၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၅ ပြင်ပလူနာဌာန/ခွဲစိတ်ဆောင် – ၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၆ သားဖွားဆောင်/မီးယပ်ဆောင် – ၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၀ (ခ) Fax No – ၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၅ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ (General/ Speciality... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ ရန်အောင်(၂)ရပ်ကွက်အုပ်စု၊နယ်မြေ(၁၉)၊တည်နေရာတပ်ကုန်းရပ်ကွက်/ဆေးရုံလမ်းနှင့်လယ်‌ဝေးလမ်းဟောင်းကြား “မြင်းရတနာ” နှင့် “ရှမ်းကန်” ဟုခေါ်တွင် သောနေပြည်တော်ပျဉ်းမနား စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရုံးတည်ရှိရာ “မင်္ဂလာကန်တော်ခန်းမ” အနီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဆေးရုံ ရုံးခန်းဖုန်း – ၀၆၇-၂၂၃၀၉, ၀၆၇-၂၂၅၁၁ ဆေးရုံ Fax – ၀၆၇-၂၂၃၀၉ E mail address – pyinmanahospital@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) (၁)အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာဌာန ... Read More | Share it now!
တပ်ကုန်းမြို့ ၊ ခုတင် ( ၁၀၀ ) ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ Location ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊နေပြည်တော် ၊ ဥတ္တရခရိုင် ၊တပ်ကုန်းမြို့ ၊ ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက် ၊ ရန်ကုန် – မန္တလေးလမ်းဟောင်း ၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၇၈/၃) အနီး ၊ လောင်ဂျီတွဒ် (96.11” 36. 9”) နှင့်လတ္တီတွဒ် ( 20.08” 56.8” )တွင် တည်ရှိပါသည် ။( ၂၉.၄၄) ဧကသို့မဟုတ် (၀.၀၄၅၉) စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၆၇- ၈၀၇၁၀၈၀ Fax No – ၀၆၇-၈၀၇၀၀၀၇ ၊ ၀၆၇-၈၀၇၁၀၈၁ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) (၃-၁) အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာဌာန (၃-၂) ကလေးကုသဆောင် (၃-၃) သားဖွား/ မီးယပ်ဆောင်နှင့်... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ Location ပုဗ္ဗသီရိမြို့ပတ်လမ်းနှင့်ဧကရာဇ်ပန်းလမ်းဆုံ၊တပင်ရွှေထီးရပ်ကွက်၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊နေပြည်တော်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၆၇၈၄၃၀၀၉၂ Fax No – ၀၆၇၈၄၃၀၀၉၂ Official E mail address – rsph.npt@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) (၃-၁) ဖျားနာကုသဆောင် (၃-၂) ခွဲစိတ်ကုသဆောင် (၃-၃) သားဖွားနှင့်မီးယပ်ရောဂါကုသဆောင် (၃-၄) ကလေးကုသဆောင် (၃-၅) အရိုးရောဂါကုသဆောင် (၃-၆) မျက်စိကုသဆောင် (၃-၇) မျက်နှာ၊မေးရိုး၊ခံတွင်းခွဲစိတ်ကုသဆောင် (၃-၈)... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ Location နေပြည်တော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၏အရှေ့ဘက်တွင်ကလေးရောဂါအထူးကုဆေး ရုံကြီး၊ အနောက်ဘက်တွင်သီရိမဏ္ဍိုင်လမ်း၊ တောင်ဘက်တွင်သီရိရတနာလမ်းနှင့် မြောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းများရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် 067-3417 170 Fax No 067-3417 170 ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) (၁) အရိုးကုသဆောင်(၁) (၂) အရိုးကုသဆောင်(၂) ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ တနင်္လာနေ့နှင့်သောကြာနေ့ နံနက်(၈:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီအထိ ... Read More | Share it now!